Thwebula Uplay 27.0.0.5086 – Windows – Vessoft
Uplay – a isofthiwe popular ukulanda imidlalo evela enkampanini Ubisoft. Isofthiwe ikuvumela ukudlala imidlalo adumile njengoba: Assassin sika Creed, Titanfall, Battlefield, Space Dead, Far Cry njll Uplay kwenza ukwengeza abasebenzisi ohlwini lwabangane, ukuxhumana nabanye abadlali futhi wabamemela umdlalo. Isofthiwe ine lwemali wangaphakathi, okuyinto ingatholakala ngokufaka iqhaza imincintiswano ahlukahlukene noma lingase baought for imali yangempela. Futhi Uplay iqhuba ngokuzenzakalelayo wokuqinisekisa of updates etholakalayo imidlalo ehlukene.
Ukukwazi ukuthenga futhi kusebenze imidlalo zakho ozithandayo
Umtapo elikhulu imidlalo
Update ngokuzenzekelayo imidlalo
English, Français, Español, Deutsch... Tor Browser Bundle 6.0.8 futhi 6.5 alfa 6
English, Afrikaans, Français, Español... Waterfox 50.1 Stable futhi Portable